Okusajingijolo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Emasimini amaningi, ngisho naphakathi kwama-agrotechnists abathandayo kakhulu, akuvamile ukuthola izihlahla zokusajingijolo eziphuzi. Abantu bajwayele ukuthi lezi amajikijolo zibomvu, kodwa akuzona amber. Ama-raspberries abomvu - yisihlobo samajikijolo asejwayelekile asendle - amahlathi e-raspberries. Kodwa uma kwenzeka lokhu kuguquka kwezitshalo "ezifuywayo", okwenza ukuba kutholakale umbala wama-raspberry ama-atypical color.
Abambalwa kithi abambonile ama-red raspberries emehlweni ethu. Kodwa kukhona amajikijolo amnyama. Futhi lokhu nakho okusajingijolo. Lolu hlobo lwemikhiqizo yokusajingijolo luyathandeka njengabamele "bendabuko". Amajikijolo amnyama okusajingijolo akuzona aziwa kakhulu, ngoba lapho kukhulunywe amajikijolo amnyama, abaningi banokuxhumana nama-blackberries.
Ukusetshenziswa kwama-black raspberries: izakhiwo eziwusizo kanye nokuphikisana
Emasimini nasezikhungweni zasehlobo ngezinye izikhathi ungathola okusajingijolo ezihlahla kanye namajikijolo amnyama. Lokhu okusajingijolo kubizwa ngokuthi i-blackberry. Abaningi bayithatha i-blackberry. Ngempela, ukufana okukhulu kakhulu: omnyama omnyama onamajikijolo anombala obomvu nezimpande ze-spiky. Blackberry okusajingijolo omnyama, okuhlanganisa izindawo eziningi eziwusizo ze-raspberries obomvu nama-blackberries, ubadlula ekuvuneni, ukunambitha, futhi ngaphezu kwakho konke, ukuwusizo empilweni yomuntu.
Iwayini elenziwe nge-okusajingijolo elenziwe ngamakhemikhali, izindlela zokupheka ezingcono kakhulu
I-Raspberries iyinhlangano ebheki elimnandi, okwenzelwe ukudala imishayo, imishayo, "amavithamini" (amajikijolo amasha, umhlabathi noshukela), i-compotes, i-syrups, noma imane iqhwa. Mhlawumbe akubona wonke umuntu owazi ukuthi akuyona nje i-dessert enhle, kodwa futhi iwayini lingenziwa kusuka ku-raspberries. Amajikijolo asetshenziselwa ukwenza iwayini elimnandi elimnandi okusajingijolo ekhaya, ngokwabo.
Izinhlobo eziyishumi eziphezulu zokulungisa ama-raspberries wesifunda saseMoscow
Raspberries - omunye amajikijolo enhle kakhulu futhi anempilo. Noma kunjalo, kubaluleke kakhulu ukukhetha izinhlobo ezifanele zokutshala endaweni ethile. Sikunikeza izinhlobo ezinhle kunazo zonke ze-raspberries eziphuthumayo zeqembu eliphakathi. I-Atlant Atlant iboniswe izihlahla ezikhulayo eziphakathi, ukuphakama kwazo okuphezulu kunoku-1.
Indlela yokoma amaqabunga okusajingijolo nendlela yokuphuza itiye
Ijubisi lokusajingijolo akukona nje kuphela elibizayo futhi elihlwabusayo, kodwa futhi nemikhiqizo ewusizo kakhulu esetshenziselwa ukwelapha imikhuhlane. Kodwa-ke, i-berry akuyona into kuphela engatholakala emanzini okusajingijolo. Ngakho-ke, namuhla sizokutshela ukuthi amaqabunga okusajingijolo asetshenziswa kanjani nokuthi awusizo kanjani, futhi aqonde ukuthi angawasebenzisa kanjani.
Indlela yokwenza i-raspberry jamu ekhaya
Ijubisi lokusajingijolo - ukwelashwa okuthandayo kubantwana nabantu abadala. Zigcwele ukubheka, zidla ishukela kancane ngeziphuzo ezishisayo, zisakaze ngesinkwa. Ilungiselelwe ukwelashwa kokushisa futhi ngaphandle kwayo. Zonke izakhiwo ezaziwa futhi eziwusizo zaleli fayela. Sifuna ukwabelana nawe ezinye zokupheka okumnandi futhi ezilula ngokwenza okusajingijolo ujamu.
Yini okufanele uyenze ne-raspberries ebusika: indlela yokuvala i-jam, i-compote, isiraphu, indlela yokuqhwaza nokugaya ushukela
I-raberryberry berry eminingi ehlotshaniswa nobuntwana. Kukhulunywa ngazo eziningi zezinganekwane, izingoma nama-epic, futhi kuvela kulo mberry obaluleke kakhulu ekuphatheni amakhaza. Kulesi sihloko sizobheka ukuvunwa kwaleli berry ebusika kanye nezakhiwo ezizuzayo zama raspberries. Izakhiwo eziwusizo zokusajingijolo Okusajingijolo kunokwakheka kwezakhi zomzimba: i-salicylic ne-ascorbic acid, amaminerali, ukukhiqizwa okunamandla namavithamini, ama-tanins, ama-pectin nezinye izici eziningi.